CrossBox အင်တာနေရှင်နယ်ကဘာလဲ | CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးအင်တာနေရှင်နယ်
ဘာဖြစ်သလဲ cROSSbOX အင်တာနေရှင်နယ်
CrossBox အင်တာနေရှင်နယ်ကခေါင်းဆောင်များကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, သင်ကြားရေးဘာသာစကား, ပထဝီနှင့်အဆင်းကိုကွဲပြားစေခြင်းငှါမယ့်ဘယ်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစကေးပေါ်တွင်, ကြံ့ခိုင်ရေး၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ရွယ်တူပူးပေါင်းမှတဆင့်လုံခြုံကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းနှင့်ဆက်လက်ပညာရေး၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ application ကိုမှသူတို့ရဲ့အပျနှံအတွက်စည်းလုံးညီညွတ်။
စိတ်ပညာရှင်များ - ကြံ့ခိုင်ရေးပညာရေးကိုစမ်းသပ်လယ်ကွင်းသဘောတရားများထို့နောက်တူသောနှင့်အတူပူးပေါင်းမှတဆင့်မျှဝေသောဒေတာများနှင့်အတူကွဲသွားရင်လာသောအခါဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက CrossBox နိုင်ငံတကာဆက်နွယ်မှုတိုင်းကြံ့ခိုင်ရေး Professional ကမှတင်ဆက်သောအတိအကျလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်
ကြောင်း CrossBox နိုင်ငံတကာနှင့်အတူဆက်နွယ်မှု၏နောက်တဆင့်ကြာပါသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏အဓိကစံချိန်စံညွှန်းများတစ်လောကလုံးဖြစ်ကြပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီပူးပေါင်း join ဖို့ပြုစုလျက်, CrossBox အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Affiliate ၏ဂုဏ်ထူးကျင်းပရန်ခွေငျးငှာအလိုရှိသောမဆိုကြံ့ခိုင်ရေးတို့ကလိုအပ်သည်။ CrossBox အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတစ်ကြံ့ခိုင်ရေး Professional ကအသိပညာ၏သူတို့ရဲ့နယ်ပယ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအောင်မြင်မှုနှင့်သင့်၏နံရံ၏နယ်နိမိတ်အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့ခွင့်ပြုလျှင်သောအပြုသဘောဆောင်ယုံကြည်ချက်ရရှိထားသူ
လေ့ကျင့်ရေးစင်တာ, မခွဲခြားဘဲပညာရေးအဆင့်, သင်ဖွင့်လှစ်မကျမည်အကြောင်း - အောင်မြင်သော, CrossBox အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Affiliate ဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့စိတ်။
ရိုးရှင်းစွာ ထား. , CrossBox Affiliates သို့သော်ပူးပေါင်းမှတဆင့်ကြံ့ခိုင်ရေးလျှောက်လွှာကိုသင်ယူအခြေခံပညာရေးမှတဆင့်ကြံ့ခိုင်ရေးဘေးကင်းလုံခြုံမှုလေ့လာပါ။
ဒါဟာပူးပေါင်းအားထုတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်နွယ်မှုအစီအစဉ်၏အဓိကမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ CrossBox အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Affiliate Program ကို၏မစ်ရှင်ကြံ့ခိုင်ရေး၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်, ကခေါင်းဆောင်များရဲ့ဘယ်နေရာမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစကေးပေါ်တွင်, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, သင်ကြားရေးဘာသာစကား, ပထဝီအတွက်ကွဲပြားနိုင်ပြီး
အသွင်အပြင်။ သို့သော်ဘေးကင်းလုံခြုံ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ application ကိုမှသူတို့ရဲ့အပျနှံအတွက်စည်းလုံးညီညွတ်
ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ရေး။ မှတ်မိဘေးကင်းလုံခြုံမှုဂုဏ်ထူး၏ဤရည်မှန်းချက်အားလုံး CrossBox အဆောက်အအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, CrossBox
နိုင်ငံတကာဆက်နွယ်မှု, လျှောက်ထားသူများအတွက်လျှောက်ထားမီ, တစ်ဦးထံမှတစ်ဦးကလက်ရှိကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောလက်မှတ်ရရှိထားသူလိုအပ်သည် အသိအမှတ်ပြုကြံ့ခိုင်ရေး Certified ခန္ဓာကိုယ် ဒါမှမဟုတ်အသိအမှတ်ပြုအလယ်တန်းပညာရေး Institution မှနေဘွဲ့။ အဆိုပါလျှောက်ထားပေးနိုင်စွမ်းရှိရမည်
ဟုယုံကြည်စိတ်ချရသောအထောက်အထားအဖြစ်ကောင်းစွာ CBI သတ်မှတ်ထားသောလက်မှတ်ရအေဂျင်စီနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးကတဆင့်, အကဆိုပါတယ်အထောက်အထားများမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်အဘို့အခွင့်ပြုချက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်သည်သင်၏လက်ရှိလက်မှတ်၏သက်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများရှိပါက www.crossboxfitness.com သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး